ထီးလေးလှတယ်မသီတာ... ထီးပန်းရောင်လေးအောက်က အမချောချောတစ်ယောက်ကို မျက်စေ့ထဲမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တယ်....
အိတ်လေးထဲမှာ သွားလေရာပါမယ့် သက်သေခံတွေပေါ့နော်း)
ဘီးဇီးပြီး ဘီးဇီးဖြစ်နေတာနဲ့ မရောက်တာကြာပြီ။ သူများတွေက ဘလော့ဂါဒေး ပြောမှ သတိရလာပြီး လာနှုတ်ဆက်တာ။ စာရေးကောင်းတဲ့ မမတို့ကို အရမ်း သတိရနေပါတယ်။
နော်ဖောရေ... ချစ်သော မျက်စိဖြင့် ကြည့်တာခြင်း တူနေကြပြီ <3 <3
အမလည်း အလုပ်တွေကြားကနေ လသာညဆီ တခါတခါ လာချောင်းဖြစ်တယ်သိလား... ခြေရာ မချန် တိတ်တိတ်ပြန်ခဲ့လို့သာ...<3<3
စိတ်ရှင်း လက်ရှင်းနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း အိတ်ကလေးပေါ့... ကိုယ်တွေလို ပေါက်ကရပေါင်းစုံ မသယ်ပိုးရတဲ့ အိတ်ကလေးပေါ့... အိတ်ပိုင်ရှင်လေးလိုပါပဲ... <3
သူများက ကျောရိုးမခိုင်တာ သူသိသားနဲ့ ဟွင့်
ဟုတ်တယ်နော်. အိတ်ကလေးကသပ်ရပ်နေတာပဲ. ထီးလေးကလဲချစ်စရာ. Safety pin ကလဲပြုံးစရာ.
PC ပြန်ကောင်းသွားပြီလားမ. အိတ်ကလေးက သပ်ရပ်နေတာပဲ. ထီးလေးကလဲချစ်စရာ. Safety pin လေးကလဲပြုံးစရာ
PC နဲ့ Laptop ပေါင်းပြီး စာရိုက်တင်နေတာ တန်ခူးရေ...:)
အမအိတ်က မသပ်ရပ်ဘူး... အခုကတမင်စီချပြီး ရိုက်ထားတာမို့...ဟီးဟီး
သူ့ပိုးရာပါပစ္စည်းတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ :)
ပေါ့ရမယ်..ပါးရမယ် မနော်ရေ... ခါးက စောင်း... လက်ပြင်ကငေါ... ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ်မို့ပါ... ခင်သေးတယ် ဟုတ်? :)